5 Ndima yeBhaibheri Unofanirwa Kuziva Nemusoro Uye Nei | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Mavhesi eBhaibheri 5 Ndima yeBhaibheri Unofanirwa Kuziva Nemusoro uye Sei
Nhasi tichave tichishanda nendima gumi dzeBhaibheri iwe unofanirwa kubata nemusoro uye nei uchifanira kuvaziva. Sevatendi, rugwaro ndirwo rukuru kwatiri chombo. Patinonamata nerugwaro, pane chikamu chechiremera chinotsigira minamato yedu. Kana tichitaura magwaro panguva yekunamata, zvinounza pfungwa yekunzwisisa kuti isu tinoziva mamiriro azvino uye isu hatisi kuziva chokwadi chekuti Mwari ane hurongwa hwemamiriro ese.
Muchinyorwa chino, tichasimbisa ndima gumi dzeBhaibheri mutendi wese anofanira kubata nemusoro uye tinotsanangurawo kuti nei zvichikosha kuziva iwo maBhaibheri ndima.
1. Johani. 3:16
Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwechete, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi Iyi hapana mubvunzo imwe yendima ine mukurumbira murugwaro. Nepo vanhu vazhinji vachingoverenga ndima iyi kuti vanakidzwe nayo, zvakakosha kuti uzive kuti ndima iyi inotakura meseji kupfuura zvinoita pfungwa dzedu diki.
Kristu paakauya panyika, akataura achisimbisa kuti pamirairo yese, rudo ndirwo rwakanyanya. Kristu akauya panyika kubudikidza nerudo runa Mwari kuvanhu. Mushure mekudonha kwemunhu wekutanga, pakave nemukana wakagadzirwa pakati pemunhu naMwari. Munhu akarasikirwa nechinzvimbo chake chakakodzera muhurongwa hwaMwari uye paive nekudikanwa kwekudzoreredzwa kwemunhu.
Kudzoreredza kwaigona kunge kusingakwanisike dai zvisiri neruregerero. Zvichakadaro, ruregerero haruitike kunze kwekunge chimwe chinhu chiri chibvumirano cheimwe. Mwari aifanira kusunungura Kristu kuti afire ruregerero rwemunhu.
Nei Uchifanira Kuziva Iyo Ndima
Dzimwe nguva dhiyabhorosi anotamba nehungwaru hwedu sevatendi. Dzimwe nguva anoita kuti tinzwe kusadiwa sekunge takapara mhosva isingakanganwirwe naMwari. Kuziva iyi ndima kunotipa iyo vimbiso yekuti Mwari vachiri kutida.
Zvinotipa kunzwisisa kuti kunyangwe patakanga tiri vatadzi Kristu akafa uye akabhadhara zvivi zvedu pamuchinjikwa. Ruponeso rwedu chibvumirano chakagadziriswa kare, zvese zvinokumbirwa kubva kwatiri kutenda muMwanakomana mumwechete akaberekwa. Usarega dhiabhori achikunyengera kuti ufunge kuti haugone kuponeswa.
2. VaRoma 8:28
"Uye tinoziva kuti zvinhu zvese zvinoshanda pamwechete kuti zviitire zvakanaka avo vanoda Mwari, kune avo vakadaidzwa maererano nechinangwa chake."
Paunenge uri mumatambudziko ehupenyu, apo dutu rehupenyu rinouya richikutsamwira nesimba, iwe unofanirwa kuziva kuti zvinhu zvese zvinoshanda pamwechete kune zvakanaka kune avo vanoda Mwari. Kuziva kuti Mwari ane hurongwa huri nani kwauri kunogadzirisa matambudziko mazhinji uye zvinopa kushinga kwekutarisana nemhando ipi neipi yematambudziko.
Nei Uchifanira Kuzviziva
Kana iwe uchiziva kuti zvinhu zvese zvinoshanda pamwechete kuti zviitire zvakanaka kune avo vanoda Mwari, kune avo vakadaidzwa zvinoenderana nechinangwa chake, zvinounza chimiro cherunyararo kunetseka mupfungwa. Kana pfungwa dzako dzichinetsekana kwazvo, kuziva kuti zvese zvinoshanda pamwechete kune zvakanaka zvinounza hushingi hwekutarisana nedambudziko uye nekukubatsira kumira wakasimba muna Mwari.
3. VaFiripi 4: 13
Ndinogona kuita zvinhu zvese kubudikidza naKristu zvinondisimbisa. Paunenge uine hope huru, vanhu dzimwe nguva vanokudzikisira pasi nemazwi. Ivo vanokuita iwe unzwe iwe haugone kuzviita kana kuwana chero chinhu kuburikidza nemashoko emuromo wavo. Kuora mwoyo uku pane dzimwe nguva kunogona kukuita kuti unzwe kusazvibata uye kutanga kukupa zvikonzero nei zvichizotadza kuti iwe uzadzise izvo zvinangwa.
Kuziva kuti hapana chinhu chisingakwanisike chinhu chikuru, uchiziva kuti iwe unogona kuita zvinhu zvese nesimba raiye anokusimbisa. Izvi zvinokupa iwe kunzwisisa kwete kuvimba nesimba rako kana simba. Kana ivo vachikuudza kuti hazvigoneke, kana ivo vachikuudza iwe kuti zvakakurisa kuti iwe ugone kuzadzisa, iwe unongoda kuvaudza kuti hausi iwe, asi Kristu anogara mauri.
Izvo hazvisi zvako zvekuzadzisa, zviri nesimba raKristu. Izvi zvinokupa iwe yakasarudzika mhando yekuvimba.
4. Mapisarema 46:1
Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, Iye aripo panguva yokutambudzika. Wanga uchimhanyira kupi kuti ubatsirwe? Rugwaro runoti Mwari ndiye mubatsiri wedu panguva yedambudziko. Izvi zvinoreva kuti pese patinonetsekana, munhu watinofanira kudaidzira rubatsiro ndiMwari. Rubatsiro rwedu haruzobvi kumunhu asi kuna Mwari.
Rangarira Kristu ane vadzidzi vaive muchikepe. Jesu akarara muchikepe uye kamwe kamwe, mhepo yakanyanya kurema zvekuti chikepe chakange chave kuda kutsemuka. Vadzidzi vakavimba nesimba ravo neruzivo sevafambisi vechikepe kuti vanunure mamiriro ezvinhu, asi zvese hazvina zvazvakabatsira. Kusvikira vashevedzera kuna Kristu kuti vabatsirwe. Kristu paakamutswa, akatsiura mhepo uye rugare rwakadzorerwa. Izvi zvinowedzera kuratidza chokwadi chekuti rubatsiro rwedu runobva chete kuna Mwari.
Nei Uchifanira Kuziva
Kuziva nzvimbo chaiyo kana munhu wekudaidzira rubatsiro kunodzora kusagadzikana kwekutsvaga imwe. Kana dambudziko rikauya, ndima iyi inotishongedzera neruzivo rwekuti rubatsiro rwedu rwunobva kuna ishe, ndiye mubatsiri wedu panguva yenhamo.
Nekudaro, pachinzvimbo chekumhanyira kune vamwe vamwari kana kutsvaga mhinduro kubva kunobva izvo zvinopesana naKristu, isu tinongoenda takananga kumuchinjikwa kunotsvaga rubatsiro.
5. Mateo 11:28
Uyai kwaNdiri, mose iwe unoshanda nekuremerwa, uye ini ndichakuzorodza.
Urwu rugwaro rwevimbiso yekuti Mwari chete ndiye anogona kupa zororo kumunhu. Rugwaro runoti huyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. Chikamu cherugwaro chinoti zvakare joko rangu rakareruka uye mutoro wangu wakareruka.
Unofanira kuziva izvi kuti urege kutorerwa mukufunga imwe nzira yekuzorora iripo kunze kwaKristu Jesu. Hapana munhu anogona zvechokwadi kupa pfungwa dzako zororo saKristu. Anobvisa mutoro pamutsipa wako uye anokupa zororo.
Previous nyayaMapisarema 18 Zvinorehwa Ndima neNdima
inotevera10 Vhesi reBhaibheri Unofanira Kunamata Napo Paunenge Uchida Kuporeswa